Izinkinga Zezimbuzi Emadlelweni
Uma izimbuzi ziqala ukufika emadlelweni, zingenisa kancane kancane ngokuzivumela amaminithi angamashumi amathathu okudla ngosuku lokuqala. Ukwandisa isikhathi sokudla ngamaminithi angamashumi amathathu ngosuku. Lokhu kungavimbela ukuqumba okubangelwa izinguquko ngokungazelelwe ekudleni kwembuzi.Ukuqumba kuvela lapho i-gesi ibanjwe isisu futhi ibonakala ngecele lobunxele elivuvukile. Kuyisimo esisongela ukuphila.
Ukuqumba okomile kuvame ukubangelwa ngokudla okusanhlamvu okuningi. Lokhu kungaphathwa ngeshubhu esiswini, imithi yokuqumba noma Ubisi lweMagnesia. Hamba nembuzi kancane bese uyondla ngehhoyi eyomileyo.
Ukuqumba kwegwebu kubangelwa ukudla ngokweqile isondlo esimanzi njengesithombo esidliwa yimfuyo, iluseni noma okusandumba. Amagwebu amancane akwenzeki ukuba imbuzi ibhodle.
Ukuze uphathe ukuqumba kwamagwebu, uDkt. Mackie Hobson we-South African Mohair Growers 'Association ukhombisa:
Ukuphuzisa amafutha emfino (20 kuya ku-100 ml) ngomlomo noma ngeshubhu.
Phatha nge-Bloat Guard® ukuze uhlukanise igwebu. Lokhu kuzokusiza ukukhulula igesi bese kwandisa uketshezi esiswini.
Isiphuzo sokuphatha umthamo u-10 ml wezimbuzi. (Ngenkomo enesisindo esingama-200 kg, umthamo uwu-30 ml weBloat Guard®.) Ukuphakamisa imilenze yangaphambili yembuzi kungasiza ukukhipha igesi emva kokwelashwa I-Bloat Guard®.
Izimila Ezinobuthi Bezimbuzi
Hlola amadlelo wezitshalo ezinobuthi njengesitshalo esijwayelekile (i-Taxus baccata) noma amaqabunga emithi yezithelo (amathunduluka, ipetshisi, iplamu) ebulalayo, ngisho nangamanani amancane.
I-Moraea (i-Iridaceae, i-tulip) no-Drimia (i-Hyacinthaceae, noma i-slangkop ngesbhunu) ivela ngaphambi kwemvula futhi ingaba yiyona kuphela indawo ephilayo ekhona endaweni.
Ezinye izitshalo ezinobuthi (ezingatholakali emadlelweni alinyiwe) zihlanganisa umvini wokuvuthwa (duwweltjie ngesiBhunu noma I-Tribulus terrestris), i-oleander, iqabunga elinobuthi kanye nama-plakkies.
Izinto Eziphila Ngokudla Umzimba Wezimbuzi
Uhlelo lokondla emadlelweni ngomjikelezo luyindlela engcono yokusebenzisa kahle umhlaba wakho nokugcina izimbuzi zakho ziphilile. Uyodinga futhi udlelo olwanele ukuvumela umhlaba ukuba uphumule. Ukuvumela ukuphumula komhlabathi (okungenani inyanga) uvumela utshani ukuthi bukhule emuva ekuphakameni kwawo okuhle - 10 cm nangaphezulu, ngaphambi kokusetshenziswa kwalo okulandelayo.
Lokhu futhi kuvimbela ukuguguleka komhlaba wakho futhi kusize ukuvimbela imfuyo yakho ukuba ibuye iphindweihlaselwe ngezilokazane ezidla umzimba. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izimbuzi emadlelweni ziyobe zithinteka kakhulu ekuhlaselweni izinto ezidla umzimba kanye nezidakamizwa zokuphatha ezithintekayo zingase zibe nemiphumela engathandeki ebisini.
Njengoba izimbuzi ziphequlula, zichitha amaqanda ezibungu emhlabathini.Iningi ziphila ngaphansi kwe-10 cm. Ngokushintshanisa izimbuzi zakho emadlelweni aphethwe ngaphansi kuka-10 cm, usiza ukunciphisa amathuba okuhlaselwa kwazo izibungu.
Izimbuzi nazo zithola igciwane lezibungu uma zidla emadlelweni angcolile.Izibungu zitholakale kubende bezimbuzi njalo zigula ngemva kokuzidla. Imijikelezo yokuphila yezibungu iyaqhubeka lapho amaqanda ayo ephuma endleni yezimbuzi.
Izibungu ziwela emaqenjini amathathu amakhulu:
Ama-roundworms - i-wireworm iyona evame kakhulu futhi iyingozi kunazo zonke
Ama-Fluke - i-flatworm enesiphithiphithi
Ama-roundworms izibungu ezijwayelekile kakhulu embuzini, iningi lalo lihlala esiswini nasegulini, kodwa futhi nasendleleni yokuphefumula. Izimpawu zihlanganisa ukuhuda.
I-tapeworms ingabonakala njengezingxenye eziphambene kumanyolo wezimbuzi kodwa azibangeli umonakalo omkhulu ezimbuznii.
Uhlobo lwezilomezivama ukungenela ubendelwezimvu(Ama-fluke) lubangela ukulimala kwesibindi kanye nezimpawu zihlanganisa isifo sohudo, 'isifuba sesikhumba' (ukuvuvukala phansi kwentamo) kanye nokuphaphatheka kwegazi. Gcina izimbuzi kude nezindawo ezimanzi.
Izimpawu zokutheleleka kwangaphakathi kwezibungu zihlanganisa ukuphofiswa kwamehlo, ukulahlekelwa isisindo nokulahlekelwa amandla. Imbuzi ingase ibe nesifo sohudo, ukukhwehlela, kanye nokunciphisa ukukhiqizwa ubisi.
Ukwelapha kwezibungu zangaphakathi kudinga amasu asebenzayo. Umlimi kufanele ahlolisise izinkinga ezithile futhi acele udokotela wesilwane sakhe ukuba sithole iseluleko. Thatha amasampula emfucumfucu wezimbuzi kusuka kwendala eyodwa noma ababili kanye neyodwa noma amabili amazinyane. Udokotela wezilwane uzokwenza isibalo seqanda ukuze ahlolisise ukutheleleka okuqondile.